I leminyaka elidlule kwaba ngezindlela eziningi hhayi isikhathi esingcono emlandweni wesintu. Kwakukhona njalo ukulwa, futhi entsha isifo esibulalayo, kwaba khona ukwahlukana lamazwe kanye elisemngceleni Wombhali ... Kodwa kwathi ngaleso sikhathi eziningi ezinhle. Iya eside kalula zihlanganisa iningi okutholwe yisayensi nokwasungulwa ewusizo.
Ngaphezu kwalokho, izimbali ubuchwepheshe owenzeka phakathi ushintsho emphakathini post-zezimboni, wathinta embonini yezimoto, futhi kuwo wonke amazwe. Ukuze eRussia, futhi ngaleso sikhathi eSoviet Union kwaba nesikhathi esihle kulesi sici zomlando. Isibonelo esimangalisayo lena imoto KrAZ-255.
Isihloko ingxoxo, njengoba usuvele waqonda kusuka esethulweni ezincane, ngeke le moto. Lokhu imoto iloli amasondo - into yisakhiwo sodumo ngempela singasho lonke Milepost embonini yezimoto kwekhulu elidlule.
ngqó, impendulo ingu KrAZ- imoto "laptezhnik," njengoba zibizwa kanjalo nabashayeli, wayephakathi amaloli ethandwa kakhulu ezweni elikhulu kangaka like eSoviet Union of the kwekhulu lamashumi amabili. Kwamaphutha kuwo uma kwakukhona, it is njalo wakhuzwa onjiniyela. Eqinisweni, futhi kwakungekho le nguqulo ye wonke amasondo imoto. ezikhishwe Ngaphambili kweminye imihlobo, kodwa ekugcineni konke yaphenduka mishini, okuyinto namuhla zingatholakala endleleni, nakuba ukukhululwa kwabo phakathi kwekhulu lamashumi amabili nanye ayisaxhunyanisiwe kugcinwe.
Okwesikhathi yayo, amakhulu amabili namashumi lweshumi nane imodeli kwakukuhle ngempela - ukubhekana nemisebenzi yawo, futhi elalihluke ngokuphelele ngokwanele. Noma kunjalo sixties kuyilapho ubambeke, lokhu ngaphandle kokungabaza imoto enkulu. Isidingo sesimanje is hhayi nje isondela buqamama, kodwa ngokoqobo kwathi nyá.
Lezi amaloli KrAz azihlukile kakhulu komunye nomunye. Uma ngikhuluma iqiniso, ukuhlukanisa imodeli eyodwa ukusuka kwenye kwakunokwenzeka kuphela ububanzi-amathayi. Nokho, ukuhlela kabusha kade, futhi sina ushintshe Umklamo imoto.
ukugcwaliswa Yangaphakathi lashintsha oda, ngokungafani kuya version yokugcina. Ngakho, imoto KrAZ-255 iloli futhi waba "inkosi komgwaqo." Ozokwamukelwa ke bonke abashayeli, ngisho noma ukuyibiza ezingxoxweni zansuku zonke kuphela ngokuthi "laptezhnikom". Noma kunjalo, onobuhle ngisho engu-amane ubudala zisasetshenziswa kulo lonke CIS, futhi kwamanye amazwe kakhulu. It sikhuluma kuphela ngokubanjwa ukukhiqizwa high quality.
Kremenchug Automobile Plant ukhiphe impela eningi imishini enjalo. Bonke benziwa ngesisekelo imodeli 214-th futhi babehola ezimbonini eziningi iminyaka eyishumi nesikhombisa.
Ukukhuluma imishini kufanele kuqale injini diesel. Umklamo, elalisetshenziswa lapha, ibizwa ngokuthi YaMZ-238. Kunamandla ngokwanele, kodwa ngesikhathi esifanayo engabizi iyunithi.
Wide-isondo, okuyinto vele abafike ngaphambi, ngisho zizoba isici esiphawula leli KrAZ-255B.
Wazimisela ngokuyinhloko for ezokuthutha impahla emikhunjini ehlukahlukene. Ngaphezu kwalokho, kalula ugibele ezimazombezombe kuphela izici wanezela. Kugcine esetshenziswa ezikhungweni eziningi zomphakathi, wayala ukulungiswa ezithile, ngokukhethekile ngensimbi ngomunye umgomo.
I gumbi, okwakubekelwa ifakwe model, senziwa okusekelwe uhlaka lokhuni, embozwe uthayela. Nezibuko esetshenziswa uqine ngokwanele ukumelana nengcindezi high. Ngaphakathi indawo ngokukhululekile abantu abathathu.
KrAZ-255 - injini ukusebenza
Chaza KrAZ isikhathi eside kakhulu. Isidingo ukuqala ngayo imininingwane isakhiwo, okuwumphumela kule sezigidigidi kunyakaza.
Njengoba ungacabanga, lokhu injini. Kodwa hhayi nje kwabanye, kanye V emise, cylinder ayisishiyagalombili. Amandla wonke diesel petrol, ikakhulu uma kucatshangelwa ubukhulu umshini, kwaba kakhulu. isethi ngayinye amasilinda ifakwe valve ezimbili, futhi lokho kwenza amandla ngokuphelele.
Lesi sakamuva kuyinto sibalo umxhwele ezingamakhulu amabili neshumi amahhashi at 2.100 linemibhikisho ngomzuzu. Torque ubuye ngempela umxhwele - 90 kg / m, ukuthatha linemibhikisho ayizinkulungwane ngomzuzu. Isilinganiso kokucindezelwa kuyinto - eyishumi nesithupha nesigamu, futhi umthamo unhlangothi - cishe nanhlanu amalitha.
Ingxenye ebalulekile ngokulinganayo imoto kuka injini. KrAZ-255 ifakwe kokubili phambili ukumiswa labaqaphi elingemuva. Babedalelwene ngokuhlukile kancane, okuyinto ngempela okunengqondo, banikezwe isisindo nobukhulu balezi, ukuthi kwakuzodingeka sisebenze.
Ngaphambili ukumiswa wenziwa usebenzisa longitudinal iziphethu ezimbili semi okweqanda. Kwakamuva ifakwe i pair ezingeziwe kabili oyibamba ukushaqeka ezidayiswayo. Okungukuthi, babeqinisile, futhi wokubacindezela futhi telescopic.
Ukumiswa misa, yena, yayisekelwe iziphethu efanayo ngaphambili. Nokho, umehluko lapha, futhi kungalesi sikhathi wonke ayisithupha torque engu izinduku.
Clutch futhi Transmission
Kremenchug imoto ifektri esetshenziswa kuheleza isigaba efanayo ukuthi yenjini, okusho YaMZ-238. Umklamo yayisekelwe akwazi ukugcina ezimbili uhlobo ezomile multi-cylinder kokucindezelwa iziphethu.
Gearbox ngokuthi YaMZ-236N, izici zayo, kwathiwa eyabizwa ngokuthi ezinhlanu-step futhi emithathu endleleni. Lapha ngisebenza uhlelo ukuhlala njalo, yebo, ngaphandle amagiya kuqala bese ukuhlanekezela. Futhi kuwufanele isizathu esikhethekile sokuba kukhulunywe khona synchronizers ku ukuhwebelana kusuka yesibili lwesithathu futhi kusukela wesine yesivinini yesihlanu.
Driveline nokudluliselwa icala
Eyokuqala kwakhiwa kusukela driveshafts emihlanu yonke. Mechanism kwaqinisa ukwesekwa Lesisemkhatsini. Ngenxa yalokhu, lonke isakhiwo sasinamandla kangangokuba futhi ngesikhathi esifanayo kulula ukuba bahlangane. Lisetshenziswe ukukhiqizwa emigodini kuphela ovulekile.
Eyesibili, esikhundleni salokho, besihambisana nesiminyaminya njengoba wemishini nezindiza ezimbili isigaba. Kufanele futhi wazi khona a umehluko isikhungo ngokuba bogie labaqaphi elingemuva. Nale kudivayisi Pheqa ikhasi ishintshiwe emuva indophi kanye nezinye nezinamathiselo.
Umklamo ukusetshenziswa ezintathu. Ngokwemvelo, base zilandele izilinganiso ezithile ngokuvumelana izingxenye eziyinhloko. Ngamunye trio kwaba ifakwe siqu igiya iyunithi yayo. Semiaxis, wapha ngokuphelele.
Kuzo zonke amabhuloho ngaphambili ivelele. Inama indlela ezengeziwe. Lesi sakamuva kuyinto njalo Isivinini amalunga omzimba. Abashayeli bazi ukuthi ngosizo lwabo, torque idluliselwa ku amasondo drive ukwandisa maneuverability ngesikhathi cornering.
Isakhiwo yesibili kwebhuloho futhi wenza izinguquko ezithile. Ngakho, lapha kukhona indawo ngayo. Isetshenziselwa njengendlela ukwesekwa ukuze ufake kahle kushaft bendiza we oluvala amasondo labaqaphi elingemuva.
Ngaphandle kwakho konke lokhu okungenhla, kufanele kuphawulwe Kwezinye izingxenye ngaphezulu. KrAZ-255 ngaphandle kwalo nje ngeke kube khona.
Okokuqala kumayelana plugs heater yenjini, kanye eyodwa elawula uhlelo ingcindezi kule amasondo. Kwaba uphawu nezinamathiselo ukuhlela kabusha ezithile elolini, edonsa ngawo wonke amasondo imoto, kodwa akuyona abalulekile ngakho.
Futhi kubalulekile ukuba uqaphele ikakhulukazi ibhasi, ukhuluma ngani elafika ngaphezu kwesikhathi esisodwa ngaphambili. Ubukhulu zabo ziyisiliva olubabazeka kakhulu - 1300h530h533 mm. Sikhishwe yokuthi umklamo kuhilela ukusetshenziswa amasondo eziyisithupha nje, kuba impela iphuzu elibalulekile.
Enye iwukuba ukusho amazwi ambalwa mayelana yebhethri. Zisetshenziswa ezimbili nje, okuyinto okunengqondo, inikezwe usayizi umshini. Uchungechunge lezi amadivaysi njengoba kuboniswa wokugubha 6ST-182EM.
Ubukhulu of KrAZ-255
Kufanele futhi nixoxe futhi ingakanani le imoto omkhulu. Empeleni, kuba ngempela isakhiwo esihlaba umxhwele ukuthi kufanele bacabangele kokubili uma ushayela futhi lapho uthenga amathuba.
Ubude kancane kwamamitha ayisishiyagalombili nengxenye. Ngaphezu kwakho konke, amamitha 8 futhi 64,5 ngamasentimitha. Ububanzi umshini mikhulu - amamitha amabili futhi ngamakota amathathu. Ukuphakama, ngendlela - ngempela isici esikhethekile elolini, njengoba kukhona uthi ezimbili ezahlukene - gumbi Ubukhulu, noma inani, ne isisitho selanga endlini. Lapha, amaphuzu kuqala kungaba amamitha amabili ayisishiyagalolunye nane amasentimitha, kanti owesibili, ngokulandelana, amamitha amathathu amasentimitha ayishumi nanhlanu.
Banikezwe imithetho kunalokho esiqinile komgwaqo ngamaloli, labo abahamba ukuthenga KrAZ, udinga ukuthi ucabange kabili, futhi ngokucophelela ufunde imibhalo. Eminye imigwaqo ngeke itholakale, ngazo kudalela ezingadingekile.
Luyakhula kancane ekuqaleni. Abaningi enkantolo oda izimoto ezikhethekile ukuze ivumelane izidingo zakho. Naphezu kweqiniso lokuthi 255B imodeli ithole kahle kunazo zonke ezaziwayo, akusiyo kuphela engatholwa endleleni ngisho nanamuhla.
Okokuqala nje kumele ishiwo ngcono ecashile umshini. It wathola 255B1 bebhala ngendlela eyimfihlo. Empeleni, zonke shintsho lwalulukhulu ohlelweni unyathela amabhuleki. ukubopha actuator wenza eceleni, okwakubonakala kuwumqondo omuhle ukutshala onjiniyela. Ngakho kwaba ngempela. Ngemva kuka-1979, lesi sitshalo Kremenchug ekhiqizwa ncamashi kubo.
Futhi, model of KrAZ eyaziwa eziningana impela 255V - ugandaganda. Yayihloselwe, njengoba ungakwazi ukuqagela, zokuhamba of imithwalo esikhulu trailer. isisindo zokugcina ongafinyelela amathani amabili nesithupha, kodwa ngezinye izikhathi ephakeme ngisho nangaphezu sibalo umxhwele kakade.
KrAZ-255D ku ekukhiqizweni awuzange umkhankaso. Lokhu kubuye ugandaganda iloli, ukuthi isebenze kuphela nama-trailer ethize. Prototypes Kuye ihlolwe, kodwa izinkomba akuzona kuze kufinyelele ezingeni oyifunayo.
Ngesinye isikhathi, babe zithandwa KrAZ-255L, okusho ugodo. Yehlukile kulaba abanye, abanalo uhlelo ukulungisa ingcindezi kule amasondo, kodwa aguqulelwe ukusebenza ezihlukahlukene trailer nokonakala.
Ngaphezu kwalokho, kukhona esinye ukuguqulwa ucezu, singasho ukukhiqizwa. 256B1-030 ezikhishwe kwaba izicucu eziyishumi nesishiyagalombili kuphela, futhi babeklanyelwe ukuba basebenze ezindaweni of kwazo imisebe emhlabeni eChernobyl amandla enuzi. Ukuze womshini izinto ezithile esetshenziswa, ezifana phambili futhi crystal. Ngemuva kwenkonzo, bangcwatshwe e amangcwaba yokukhishwa kwemisebe.
A amazwi ambalwa sokuvalelisa kulabo abafuna ukuthenga lezi zimoto. Okokuqala, KrAZ ukulungisa kungenzeka kuwe uvivinyo lwangempela. Iqiniso ukuthi izindlela ezintsha e ukusebenza hhayi okungaka. Ngoba ukuthola into ngeke neze eqolo. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa esikhundleni akuphephile kakhulu ngoba aboshiwe, ngaphansi nezinye izindlela. Umshini kakhulu efanayo ithathwa ukukhiqizwa iminyaka engaphezu kwengu-10 edlule.
Yini emotweni yasekhaya KrAZ-255 ngentengo? Lo magazini sinzima kakhulu. ukukhiqizwa Series iphelile isikhathi eside, okusho ukuthi uma nokuzuza, kwaba kuphela b / imoto. Kodwa lapha, konke kuzoncika isimo. Ngokwesilinganiso, ukuthengwa kuyokulahlekisela ezinhlanu kuya kweziyisishiyagalombili dollar ayinkulungwane.
Ngakho, thina esiphethweni okuyinto imoto yasekhaya KrAZ lobuchwepheshe Ukucaciswa, izilinganiso zobukhulu kanye namathuluzi intengo.
Imoto Incazelo Kamaz 5320